प्रश्नः मैले कुनै साथीसँग यौनसम्पर्क राखेकी थिएँ । मलाई कताकता गर्भ बस्न गएको छ की भन्ने डर भएकाले यौनसम्पर्क राखेको पाँच दिनपछि डीपी टेस्ट गराएँ, त्यसले नेगेटिभ नै देखायो । एक जना मित्रले गर्भ रहेको पाँच दिनमा कहाँ थाहा हुन्छ भन्यो । म दुविधामा परें । एक सातामा फेरि डीपी टेस्ट गरें । फेरि पनि नेगेटिभ नै देखियो । गर्भ रहेको कुरा सहवासको कति दिनपछि थाहा हुन्छ ? डीपी टेस्टले कति दिनसम्मको गर्भ छ वा छैन भन्ने जाँच गर्छ ? के डीपी टेस्टले यदि गर्भ रहेको वा सम्पर्क गरेको एक दिनमै पत्ता लगाउँछ ? एक सातासम्म टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखिए पनि पछाडिका दिनमा डीपी टेस्ट ले पोजेटिभ देखाउने सम्भावना कति हुन्छ ? यदि पोजेटिभ नै देखियो भने शरीरमा कुनै असर नपर्ने कुनै औषधी छ ?
उत्तरः गर्भको शुरुवात पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र महिलामा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रूपमा १. डिम्ब निष्कासन, २. यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन ५. डिम्बरोपणजस्ता कुरा आवश्यक छ । यौन सम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र
त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बसँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ । यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र त्यही नै विकसित भएर शिशु बन्छ ।
किशोरावस्था तथा युवावस्थामा यौनइच्छा एकदमै तीव्र हुने भए पनि प्रायःजसो उनीहरू यसका लागि आवश्यक रूपमा तयार हुँदैनन् र गर्भ निरोधका प्रभावकारी उपाय नपाउँदा गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । आपत्कालीन गर्भनिरोधको उपाय सहज रूपमा गर्न सकिने भए पनि अझै त्यति व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । यस किसिमको यौनसम्पर्कपछि आकस्मिक गर्भनिरोधको उपाय प्रयोग गर्न सके गर्भ रहँदैन । गर्भनिरोधको खाने चक्की नीलोकनलाई आपत्कालीन गर्भनिरोधका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यौनसम्पर्क भएको जति सक्यो चाँडो अर्थात् ७२ घन्टाभित्र त्यसको पहिलो मात्रा खाइसक्नुपर्छ । अर्को मात्रा पहिलो मात्रा खाएको १२ घन्टा पछि खानुपर्छ । अचेल आकस्मिक गर्भ निरोधका लागि प्रोजेस्टेनरोन मात्र भएको औषधी पनि पाइन्छ । कपर टीलाई पनि यौनसम्पर्क भएको पाँच दिनसम्ममा आपत्कालीन गर्भ निरोधका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गर्भ रहे-नरहेको कसरी थाह पाउन सकिन्छ ?
महिनावारी रोकिनु यसको एउटा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण लक्षण हो । त्यसबाहेक पनि गर्भ रहेपछि महिलाको शरीरमा केही परिवर्तन आउँछ । यी कुराको पहिचान गरेर गर्भ रहे-नरहेको छुट्टयाइन्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने महिनावारी नहुने, स्तन छाम्दा हल्का रूपमा दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, मनोदशामा परिवर्तन, थकाई लागे जस्तो हुने, खाने बानी वा रुचिमा परिवर्तन तथा छिटोछिटो पिसाब लाग्ने हुन सक्छ । त्यसैगरी केही समयपछि स्तन अझ ठूलो हुने, स्तनको मुन्टो गाढा रंगको हुने, योनिबाट सेतो पानी बग्ने, पेट ठूलो हुनुका साथै बच्चा चल्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यस्ता लक्षणमध्ये धेरैजसो भेटिए गर्भ रहेको भन्न सकिने स्थिति हुन्छ । कतिपय परिस्थितिमा लक्षण तथा चिह्नहरूका आधारमा शारीरिक जाँच गरेर मात्र गर्भ रहे-नरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिन्छ ।
प्रविधिको विकाससँगै गर्भ रहेको शंका भए पिसाब परिक्षण गरेर सजिलैसँग गर्भ रहे-नरहेको कुरा छुट्टयाउन सकिन्छ । यस्तो परीक्षणलाई अंग्रेजीमा एचभनलबलअथ त्भकत भनिन्छ ।
Pregnancy test कत्तिको भरपर्दो हुन्छ ?
महिलामा गर्भवती हुने प्रक्रिया सुरु भएसँगै बढ्ने एक किसिमको Human Chorinonic Gonadotropin (HCG) भनिने हार्मोनको परीक्षण गरेर गर्भ रहे-नरहेको नतिजा निकालिन्छ । अचेल राम्रा जाँच गर्ने साधनको सहयोगले डिम्बनिषेचन भएको यस्तै आठौं वा नवौं दिनमा यो हार्मोनको मात्रा पहिचान गर्न सकिन्छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यौनसम्पर्क भएको भन्दा डिम्ब निष्कासनको समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने शुक्रकीट महिलाको प्रजनन अङ्गमा पाँच दिनसम्म बाँच्न सक्छ, यौनसम्पर्कको केही समयपछि पनि डिम्ब निषेचित हुनसक्छ । डिम्ब निष्कासन भएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी हुन्छ, तर महिला गर्भवती भए महिनावारी हुँदैन । महिला गर्भवती भए ज्ऋन् को मात्रा प्रत्येक दुई दिनमा दोब्बर हुन्छ र यस्तै ६० वा ७० दिनमा सबैभन्दा बढी हुन पुग्छ र बिस्तारै कम हुन थाल्छ । यो परीक्षण गर्दा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा हार्मोन भए ठीक नतिजा निस्कन्छ, त्यसैले डिम्ब निषेचनको १० दिन वा त्यसपछि परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यदि तपाई गर्भवती हुनुभएको छ भने महिनावारी हुनुभन्दा एक हप्ताअघि नै HCG को मात्रा ५-५० mlU पुग्छ । स्तरीय परीक्षणले ५० mlU सजिलै नतिजा देखाउन सक्छ । त्यसैले नेगेटिभ आए केही दिनपछि पुनः परीक्षण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अचेल केही परीक्षणले यसभन्दा कम -जस्तै २५ mlU अर्थात् केही पहिले पनि नतिजा देखाउन सक्छ । घरैमा परीक्षण गर्न सकिने यस्ता साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले यो यस्तै ९७ वा त्यसभन्दा बढी ठीक नतिजा दिने किसिमको हुन्छ भने पनि केही अध्ययनले २५ प्रतिशतसम्म गलत नतिजा आउने कुरा गरेका छन् । गुणस्तरीय साधन प्रयोग गरी निर्देशनअनुसार सही रूपमा परीक्षण गरिएको भए ९९ प्रतिशत सम्म ठीक नतिजा प्राप्त हुन्छ, तर थोरै नै भए पनि गलत नतिजा हुन सक्ने भएकाले अन्य लक्षण तथा परीक्षणको पनि भर गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तपाईंले गर्नु भएको टेस्ट के होला ?
तपाईंले कुन परिक्षण विधि अपनाउनुभयो भन्न सकिने स्थिति त भएन, तर DP Test भनेको शायद Digital Pregnancy Test नै हो । यसले विशेष गरेर तपाईं परीक्षणको नतिजालाई स्पष्ट गरिदिन्छ । यसले गर्भ रहेको छ सातामा गर्भको अवधि पनि बताउनसक्छ । महिनावारी हुनुपर्ने दिन नभएको भोलिपल्ट नै यसले ९९ प्रतिशत सही नतिजा दिन्छ । ज्ऋन् भएका औषधीबाहेक सामान्यतया अन्य कुनै औषधीको सेवनले यसको नतिजालाई प्रभाव पार्दैन ।